fitaovam-pitaterana fiara vaventy Factory | Mpanamboatra sy mpamatsy fiara vaventy China
Valin'ny tanky Aluminium API Adapter Valve, famoahana ary famoahana
Ny API Adapter Valve dia apetraka amin'ny ilany iray amin'ny farany ambany amin'ny tanker, miaraka amina endrika firafitry ny fifandraisana haingana. Ny refy Interface dia natao mifanaraka amin'ny fenitra API RP1004. Ity dia singa iray manan-danja amin'ny rafitra fampidinana ambany mba hahazoana detachment haingana tsy misy famoahana, azo antoka sy azo antoka kokoa izany rehefa manao ny asa fampidinana sy famoahana. Ity vokatra ity dia mety amin'ny rano, gazoala, lasantsy sy solika ary solika maivana hafa, saingy tsy azo ampiasaina amin'ny asidra manimba na mpanelanelana alkali
Ny Gravity Drop Coupler dia manatsara ny fahombiazany rehefa manao ny asa famoahana entana. Ny famolavolana zoro oblique dia mety amin'ny famoahana ny hery misintona mba hahatonga ny famoahana entana hadio sy haingana kokoa. Arovy tsara ny fantsona tsy hiondrika rehefa mamoaka. Ny interface vehivavy-Coupler dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana API RP1004, azo ampifandraisina amin'ny API Coupler mahazatra.
Adaptera fanarenana etona kalitao ho an'ny kamio tanker solika
Ny adaptera fanarenana etona dia napetraka amin'ny fantsom-panafody amin'ny sisin'ny tanker miaraka amina valizy poppet float maimaim-poana. Ny fantsom-panafody hosotra dia mifamatotra amin'ny adaptatera fanarenana etona rehefa manokatra valizy poppet. Rehefa vita ny famoahana entana dia mihidy hatrany ny valizy poppet. Napetraka ao amin'ny adaptatera ny dofotra vovoka, rehefa tsy ampiasaina, hisorohana ny etona misy lasantsy handositra ary hisorohana ny rano, vovoka ary potipoti-javatra tsy hiditra ao anaty tanky.
VATO BOTOTOMA, VALVE FOOT EMERGENCY, VALVE CUT-OFF EMERGENCY ho an'ny tranofiara fitaterana solika
Ny valizy ambany tanana dia napetraka eo ambanin'ny tanker, ny faritra ambony dia voaisy tombo-kase ao anaty tanker. Ny famolavolana loara ety ivelany dia mametra ny fiparitahan'ny vokatra rehefa potraka ny tanker, dia ho tapaka avy hatrany izy io amin'ny alàlan'ity alàlan'ny alàlan'ny trondro ity raha tsy misy fiantraikany amin'ny famehezana. Izy io dia hiaro amin'ny fomba mahomby ilay tanker mihodina mihoatra ny famoahana mba hiantohana ny fiarovana rehefa fitaterana. Ity vokatra ity dia mety amin'ny rano, gazoala, lasantsy sy solika ary solika maivana hafa, sns.
Saron'ny lavaka famokarana kalitaon'ny alimina ho an'ny kamio kamiao mpitondra solika
Ny fonosana fantsona dia napetraka eo an-tampon'ny fiara fitaterana solika. Izy io dia ny fidirana anatiny amin'ny famoahana, ny fanamarinana ny fanarenana ny etona ary ny fikojakojana ny tanker. Izy io dia afaka miaro ny tanker amin'ny vonjy maika.
Raha ny mahazatra dia mikatona ny valizy miaina. Na izany aza, rehefa miova sy mampidina ny hafanana ivelany ny solika, ary hiova ny tsindry amin'ny tanker toy ny tsindry rivotra sy ny tsindry amin'ny fantsona. Ny valizy mifoka rivotra dia afaka misokatra ho azy amin'ny tsindry rivotra iray sy ny tsindry banga mba hahatonga ny tsindry amin'ny tanky amin'ny toe-javatra mahazatra. Raha misy ny vonjy maika toy ny fihodinan'ny toe-javatra dia hikatona ho azy izy io ary afaka misoroka ny fipoahan'ny tanker koa rehefa may. Satria hisokatra ho azy ny valizy mahareraka maika rehefa mihombo ny tsindry anaty fiara vaventy amin'ny faritra iray.
Vidina mora karbona Carbon vy 16 "/ 20" fonosana ho an'ny tranofiara fitaterana solika
Manhole Cover dia apetraka eo an-tampon'ny tanker mba hisorohana ny famoahana solika ao anaty rehefa mihodina ny tanker. Miaraka amin'ny P / V vent ao anaty hanitsiana ny tsindry. Rehefa misy ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry ao anatiny sy ivelan'ny fiara mifono vy dia hiditra ho azy na handany rivotra hanitsy ny tsindry hahafahany miantoka ny fiarovana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Izy io dia mety amin'ny fitaterana solika, gazoala, solitany ary ireo solika maivana hafa, sns.